Rado Ramparaoelina Tokony hazavaina bebe kokoa ny tambavy CVO
Niteraka resabe teto amin’ny firenena tamin’ity herinandro ity ny fahaterahan’ilay tambavy CVO na ny Covid Organics izay fanefitry ny tsimok’aretina coronavirus vokarin’ny IMRA.
Nanao rano lava ny fanehoan-kevitra mifandraika amin’izany. Misy ireo mankasitraka nefa misy koa ireo tsy mankasitraka. Ho an-dRado Ramparaoelina manokana, Ben’ny tananan’Ampitatafika dia notsipihiny fa ny fanazavana mahakasika ity fanafody ity no tsy ampy. Io no tokony hatao be dia be hoy izy ary avela halalaka ny olona tsirairay avy handray sy hisotro izany. Amin’ny ankapobeny mantsy hoy izy dia samy manana ny toe-batany ny tsirairay eny fa dia ireo ankizy madinika aza. Misy hoy izy ireo manaraka fitsaboana manokana ka tsy fantatra na mety aminy io tambavy io na tsia. Misy koa anefa hoy izy ireo taizan’aretina toy ny diabeta….ka tsy maintsy mbola miresaka amin’ny dokoterany. Niroso tamin’ny fizarana vary mora teny amin’ny fokontany Malaza ity Ben’ny tanana ity omaly, fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana. Vary miisa 850 gony no natolotra tamin’izany ho an’ireo olona sahirana ka ny 550 gony no tonga mialoha. Ny kaominina no niantoka ny fitaterana izany niala teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Nampiavaka ny fizarana moa ny fiantsoana ny olona tompony tsirairay imaso amaso ary nanao sonia raha napetraka teny anivon’ny komitin’ny loharano ny anjaran’ireo tsy tonga.